Ụdị Nchaji Ụgbọ ala eletrik
Ọnọdụ 1 chaja EV
Teknụzụ nchaji nke ọnọdụ 1 na -ezo aka na -akwụ ụgwọ ụlọ site na ọkọlọtọ ọkọlọtọ nwere eriri mgbatị dị mfe. Ụdị chaja nke a gụnyere ịtụnye ụgbọ eletriki n'ime oghere dị n'ụlọ. Ụdị chaja nke a gụnyere ịtụnye ụgbọ eletriki n'ime oghere dị n'ụlọ. Usoro nchaji a anaghị enye ndị ọrụ nchedo ujo megide iyi DC.
MIDA EV Chargers anaghị enye teknụzụ a wee tụọ ndị ahịa ha ume ka ha ghara iji ya.
Ọ bụ nkwụghachi nke na -eme na ntụgharị ọzọ (CA), ruo 16 A, site na oghere ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na enweghị nchekwa na nkwukọrịta na ụgbọ ala.
A na -ejikarị ọnọdụ 1 maka ụgbọ ala ọkụ, dịka ọmụmaatụ ọgba tum tum eletrik.
Ọnọdụ 2 EV chaja
Nchaji mode 2 na -agụnye iji eriri pụrụ iche nwere nchedo ujo jikọtara ọnụ megide AC na DC. Na ọnọdụ nchaji 2, a na -enye eriri chaja na EV. N'adịghị ka chaja nke ọnọdụ 1, eriri chaja nke ọnọdụ 2 nwere nchekwa n'ime eriri ndị na-echebe megide ujo eletrik. Nchaji mode 2 bụ ugbu a bụkarị ụdị chaja EVs.
Ọ bụ nkwụghachi na AC site na oghere ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke nwere ngwa nchekwa agbakwunyere na eriri chaja.
Ngwa nchedo kwuru na “Igbe njikwa dị ike” (ICCB) nwere ọrụ ịchịkwa ike yana inyocha oke nchekwa (dịka ijikọ nchedo dị iche), a na -ejikarị ọnọdụ a na mpaghara ụlọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ bụghị maka imegharị ya. ndị ọzọ ma ọ bụ ọha.
Ọnọdụ 3 EV Nchaji
Nchaji mode 3 na -agụnye iji ọdụ chaja raara onwe ya nye ma ọ bụ igbe mgbidi etinyere n'ụlọ maka chaja EV. Ha abụọ na -enye nchebe ujo megide AC ma ọ bụ DC. Na ọnọdụ 3, a na -enye eriri njikọ na igbe mgbidi ma ọ bụ ọdụ chaja na EV achọghị eriri raara onwe ya nye maka chaji. Nchaji mode 3 bụ ugbu a ụzọ kachasị mma nke chaja EV.
Ọ bụ mgbe ejikọtara ụgbọ eletriki na ebe a na-akwụ ụgwọ (EVSE) nke na-enye: isoro ụgbọ ala na-ekwurịta okwu site na usoro PWM, iji wepụ ọrụ nke nchebe dị iche na onye na-echebe moto na magneto-thermal na ijikwa nkwenye na nchekwa kwesịrị ekwesị. ebe nyocha. Site na ụdị a, enwere ike ịgbanye ụgbọ ahụ na ike atọ ruo 63 A (ihe dị ka 44kW) na mpaghara nkeonwe yana nke ọha, site na nkwụnye nkwụnye ụdị 2.
Ọnọdụ 4 DC chaja ngwa ngwa
A na-akpọkarị ọnọdụ 4 'DC fast-charge', ma ọ bụ naanị 'ngwa ngwa'. Agbanyeghị, nyere ọnụego ịkwụ ụgwọ dị iche iche maka ọnọdụ 4 - (nke na -amalite ugbu a site na obere nkeji 5kW ruo 50kW na 150kW, gbakwunyere n'oge na -adịghị anya a ga -ewepụta ụkpụrụ 350 na 400kW)
Ọ bụ mgbe nkwụghachi ụgwọ na -akwụ ụgwọ site ugbu a (CD) nke nwere njikwa yana ọrụ nchekwa.Ọ nwere ike kwụnye nkwụnye nkwụnye ụdị 2 maka ebili mmiri ruo 80 A, ma ọ bụ ụdị Combo maka ebili mmiri ruo 200. A, nwere ike ruo 170 kW.